Ebumnuche 3 kpatara ntụgharị igwe adịghị nso na ntụgharị mmadụ | Martech Zone
Ebumnuche 3 Nsụgharị Ngwaọrụ Adịghị Nso na Nsụgharị Mmadụ
Ọtụtụ afọ gara aga, echetara m saịtị niile ahụ gụnyere bọtịnụ ntụgharị asụsụ akpaghị aka dị egwu. Pịa bọtịnụ na saịtị na-abụghị nke Bekee ma enwere ike ịgụ ya. Nnwale kacha mma bụ ịtụgharị paragraf site na Bekee gaa n'asụsụ ọzọ… wee laghachi Bekee ka ị hụ otu nsonaazụ dị iche.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na m na-atụgharị paragraf mbụ site na Bekee gaa na Spanish ma na-eji ya ọzọ ntụgharị google, lee ihe nsonaazụ ya bụ:
Afọ ndị gara aga, echetara m saịtị ndị ahụ bọtịnụ niile gụnyere ntụgharị igwe dị egwu. Click pịa bọtịnụ na saịtị ọzọ na-abụghị Bekee ma nwee ike ịkọwa ya. Ihe kachasị mma bụ ịtụgharị paragraf site na Bekee gaa n'asụsụ ọzọ… wee laghachi Bekee iji hụ otú ihe si dị iche.
N’otu nzọụkwụ dị mfe, ị ga - ahụ ọnụ ọgụgụ nke izi ezi na ire ụtọ verbiage nke furu efu. Ihe na-agaghị emeli nke ntụgharị asụsụ igwe bụ otu ihe ahụ ha nọrọ kemgbe ọtụtụ afọ. Ntụgharị asụsụ igwe adịghị onodu, ikike imeri ihe edoghi anya, na enweghị ahụmahụ. The igwe agụghị akwụkwọ na afọ 20 + na ngalaba ma ọ bụ isiokwu akọwapụtara oge. Okwu anaghị atụgharịrị, a na-atụgharị ya dabere na isiokwu na ahụmịhe nke onye edemede na onye na-agụ ya.
N'ezie, onye ntụgharị mmadụ agaghị etinye aka n'akpa gị, ha nwere ike ọ gaghị enwe ike iso gị gaa n'ụlọ oriri na ọ Thaiụ Thaiụ ahụ ezigbo ma ọ bụ ezumike mba ofesi, yabụ lee ihe anyị kwadoro: Mgbe ịchọrọ nsonaazụ ozugbo, ha anaghịkwa ' Ikwesiri izu oke, odi mma iji Google Translate. Maka ụdị azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ga-abụrịrị eziokwu, ọ kacha mma ịrapara na ndị ntụgharị mmadụ.
Nke a bụ ule isi na isi site na Okwuchi nke na-enye ụfọdụ nchoputa na omume kacha mma nke Ntughari igwe na Ntughari mmadu.
Tags: google translatentụgharị googlentughari mmaduntụgharị asụsụ igweikwu okwu
Francesca Mentasti kwuru
Mar 7, 2016 na 8: 14 AM
Na-akpali mmasị ma na-akpa ọchị !!!! Echere m na igwe agaghị ada mmadụ !!